कस्ता ब्यक्ति ले लगाउन हुदैन भ्याक्सिन" भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना" आरु के के हुन्छ त ? - Info Nepal
INFONPLसमाचारकस्ता ब्यक्ति ले लगाउन हुदैन भ्याक्सिन" भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना" आरु के के हुन्छ त ?
कस्ता ब्यक्ति ले लगाउन हुदैन भ्याक्सिन” भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना” आरु के के हुन्छ त ?
कस्ता ब्यक्ति ले लगाउन हुदैन भ्याक्सिन" भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना" आरु के के हुन्छ त ?
कस्ता ब्यक्ति ले लगाउन हुदैन भ्याक्सिन” भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना” आरु के के हुन्छ त ? Vaccine; लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना। यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत। जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन सम्बन्धित दुर्लभ न्यूरोलोजिकल डिस्अर्डर गियान बार सिन्ड्रोमबारे अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन एफडीएले नयाँ चेतावनी जारी गरेको छ । भ्याक्सिन प्रदान गरिएका साढे १२ मिलियनमध्येबाट एकसयजनामा यस्तो सिन्ड्रोम देखिएपछि एफडीएको नयाँ चेतावनी आएको हो । एफडीएले ९५ जनाको केस गम्भीर प्रकारको रहेको बताएका छन् !
Vaccine लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना। यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत। जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन सम्बन्धित दुर्लभ न्यूरोलोजिकल डिस्अर्डर गियान बार सिन्ड्रोमबारे अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन एफडीएले नयाँ चेतावनी जारी गरेको छ । भ्याक्सिन प्रदान गरिएका साढे १२ मिलियनमध्येबाट एकसयजनामा यस्तो सिन्ड्रोम देखिएपछि एफडीएको नयाँ चेतावनी आएको हो ।
फ्लु सिजनमा समेत अमेरिकामा यस्ता केही केसहरु देखिने गरेका छन् । फ्लु भ्याक्सिन लगाउँदासमेत १० लाखमा एकदेखि दुईसम्म यस्ता केसहरु देखिने गरेका छन् । जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित पछिल्ला केसहरुमा भने धेरै उमेरका पुरुषहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । धिकांश गियान बार सिन्ड्रोमका केसहरु भ्याक्सिन लगाएको दुई सातासम्मका रहेका छन् भने अधिकांश ५० बर्ष नाघेका पुरुषहरु रहेका छन् । यदि भ्याक्सिन लगाएपछि व्यक्तिमा झमझमाउने र कमजोरी अनुभव भएमा तत्काल स्वास्थ्य सहायता खोज्न एफडीएले सुझाव दिएको छ ।
समुह बाहेक जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रदान गरिने भएको छ । नेपालमा रहेका शरणार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाईकर्मीहरूलाई समेत यो भ्याक्सिन दिइने भएको छ ।अमेरिकाले कोभ्याक्समार्फत प्रदान गरेको भ्याक्सिन काठमा। साभार:न्युज नेपाल